aung myo set : Android ဖုန်း Setting ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီး လန်းရအောင် or Apk Multi-Tool (Update Post)
Android ဖုန်း Setting ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီး လန်းရအောင် or Apk Multi-Tool (Update Post)
၁။ Root Explorer app သုံးပြီးတော့ ဖုန်းထဲက System>app ထဲက setting.apk နဲ့ System>framework ထဲက framework-res.apk ကို copy ကူးပြီး ကွန်ပျူတာထဲထည့်ထားပါ။
၂။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကိုဖြည်ပါ။ဖြည်လို့ရလာတဲ့ Apk Multi ဖိုဒါထဲကိုဝင်၊ other ဖိုဒါထဲကို ဆက်ဝင်ပြီး အဆင့် ၁ မှာရလာတဲ့ framwork-res.apk ဖိုင်ကိုအဲဒီ other ဖိုဒါထဲကို ထည့်ပါ။
၃။ Apk Multi-tools folder ထဲက 25kB ရှိတဲ့ ဒုတိယ Setup.bat ကို run ပါ။
၄။ အပေါ်က ပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် option2ကိုရွေးပါ။ Keyboard ကနေ2လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ရုံပါပဲ။ ပြီးရင် install framework ဖြစ်တဲ့ option 1 ကိုရွေးပါ။
၅။ ပြီးသွားလို့ အပေါ်က screen ကိုပြန်ရောက်ရင် option3ကိုရွေးပါ။ Press any key to continue လို့ပေါ်လာရင် key တစ်ခုခုနှိပ်လို့ ပထမ screen နေရာပြန်ရောက်ရင် အဲဒီဟာကို ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ။ (ပထမဆုံး software အသုံးပြုခါနီး တစ်ခါလုပ်ပီးရင် နောက်ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး)
၆။ အဆင့် ၁ မှာ ကွန်ပျူတာထဲထည့်ခဲ့တဲ့ setting.apk ကို ” place-apk-here-for-modding ” လို့ရေးထားတဲ့ ဖိုဒါထဲကိုထည့်ပါ။
၇။ Script.bat ကို Double click နှိပ်ပြီး run ပါ။
၈။ အပေါ်ပုံမှာ မျှားပြထားတဲ့ Option ဖြစ်တဲ့ Option 10 ကိုရွေးချယ်ပါ။ (10 လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။)။ အဆင့် ၁ မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ framework-res.apk ဖိုင်ကို mouse နဲ့ပဲ အပေါ်က screen အမဲကြီးပေါ်ကို ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် enter ခေါက်ပါ။
၉။ ပြီးလျှင် အဲဒီ software ကို ဘေးခဏဖယ် (Minimized လုပ်ပြီး) စောစောက Apk Multi-tools ဖိုဒါထဲသွားပါ။ Project ဆိုတဲ့ ဖိုဒါရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲဝင်လိုက်ရင် Setting.apk ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့ ဖိုဒါလေးတွေမှာပါ။
ဒီကောင်ကို အရင်မပြင်ခင် trick လေးလုပ်ရအောင်။ ( ဘာလို့ trick လုပ်တာလဲဆိုရင် အထဲမှာဖိုင်ကိုဝင်ပြင်ပြီးသွားလို့ apk ကိုပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့အခါ အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ memory ပမာဏကများပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မပြင်ခင် ပြန်ပေါင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တည်ဆောက်မှုက နည်းသွားတဲ့အတွက် Apk Multi-tool software က handle လုပ်နိုင်သွားပါတယ်။ မနေ့ကမှ တွေ့ထားတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် solution လေးပါ:P)
၁၀။ အဲဒါဆို စောစောက ဘေးဖယ်ထားခဲ့တဲ့ software ဆီပြန်သွားပြီး Option 11 ကိုရွေးပါ။ Building apk ဆိုတဲ့ အဆင့်မှာကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ အချိန်တစ်ခုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါလိမ့်မယ်။ n လိုက်ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
၁၂။ ပြီးရင် အဆင့်၃ မှာ သွားခဲ့တဲ့ ” place-apk-here-for-modding ” ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲသွားပြီး System_Setting.apk ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို delete လုပ်လိုက်ပါ။
၁၃။ ပြီးရင် စောစောက(အဆင့် ၇) Project ဖိုဒါထဲပြန်သွားပြီး Setting.apk ဖိုဒါထဲက res ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပါ။
၁၄။ res ဖိုဒါထဲမှာ Values ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကိုရှာပြီး အဲဒီထဲဝင်လိုက်ပါ။
၁၅။ String.xml ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို Right Click နှိပ်ပြီး Note++ ကိုရွေးပေးပါ။ (Note++ software အား Google တွင်အလွယ်တကူရှာပြီး Download & Install လုပ်နိုင်ပါတယ်)
၁၆။ အဲဒီကျရင်တော့ Program တွေရေးထားတဲ့ စာတွေကိုမြင်ရမှာပါ။ အဲဒီ Note++ ရဲ့ အပေါ်ဘက်နား File တို့ Edit တို့ဘေးမှာ Search ဆိုတာရှိပါတယ်။ Search ထဲကို သွားပြီး Find ကိုရွေးပေးပါ။
၁၇။ ပေါ်လာတဲ့ box လေးက Replace ဆိုတဲ့ tab လေးကိုရွေးပေးပါ။ (Find tab ရဲ့ဘေးမှာပါ)
၁၈။ Find what ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ စာကိုရိုက်ပါ။ (ဥပမာ- Wifi ကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Wifi လို့ရိုက်ပါ)
၁၉။ ပြီးရင် အောက်က Replace with ဆိုတဲ့နေရာမှာ အစားထိုးချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ပါ။ (ဥပမာ- ဝိုင်ဖိုင်)
၂၀။ ပြီးရင်တော့ အဲဒီ box လေးရဲ့ညာဘက်ခြမ်မှာ Find next ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင် Wifi ဆိုတဲ့နေရာကို ညွှန်ပြပေးပါတယ်။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ။
၂၁။ မှတ်ထားဖို့က Wifi (ဥပမာ) လို့ပါတဲ့နေရာတိုင်းကို ပြောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်က ပုံမှာပြထားတဲ့ နေရာမျိုးက စာလုံးမှာပဲ အစားထိုးရမှာပါ။ လေးထောင့်တုန်းလေးတွေနေရာမှာပေါ့။ ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် လောလောဆည် ဘယ်ဘက်နားက wifi ဆိုတာလေးကို ညွှန်နေပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင် Find next ကို ထပ်နှိပ်ပြီး ညာဘက်ခြမ်း </string> လို့ရေးထားတဲ့စာရဲ့ ရှေ့က နေရာက စာသားတွေမှာအစားထိုးရမှာပါ။ ပုံထဲက အစားမထိုးရသေးတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Line no. 501 က wifi_error ဆိုတာကို တွေ့မှာပါ။ အဲဒီမှာ အစားမထိုးပဲနဲ့ အဲဒီဘေးက Error လို့ အမဲရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ အစားထိုးမှာပါ။ အဲဒီ error မှာအစားထိုးမယ်ဆိုရင် search မှာ error လို့ရိုက် Find next နဲ့ အဲဒီနေရာမရောက်မချင်း နှိပ်သွား ရောက်ရင် replace ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ (အစားထိုးမယ်ဆိုရင် Find next အောက်က replace ကိုနှိပ်ပါ။)
၂၂။ အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ စာတွေကို replace လုပ်သွားရုံးပါပဲ။ Search နဲ့ replace မလုပ်ချင်ရင်လဲ ကိုယ့်ဘာသာအဲဒီ page မှာမဲ mouse နဲ့စာကိုထောက် delete လုပ်ပြီး ရေးထားတဲ့ စာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့။ (စာကတော့ အဲဒီနေရာမှာပဲရိုက်ရင် အတုန်းတွေပဲမြင်ရမှာပါ။ Newfolder အသစ်ကိုတစ်နေရာမှာလုပ်ပြီး အဲဒီ folder ကို rename လုပ် ပြီးရင် copy ကူးထည့်၊ လဲရတာပဲနော့်:)
၂၃။ replace လုပ်လို့ပြီးသွားရင်တော့ save လုပ်ပြီး Note++ ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
၂၄။ အဆင့် ၉ မှာ ဘေးဖယ်ထားတဲ့ software ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး option 11 ကိုရွေးပါ။ 11 လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်။
၂၅။ Building apk လို့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီး ပြီးသွားရင် မေးခွန်းတစ်ခုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ y ကိုရွေးပေးပါ။
၂၆။ n လို့ရွေးပြီးသွားလို့ Please make your decision ဆိုတဲ့နေရာပြန်ရောက်ရင် အဲဒီ software ကိုပိတ်ပြီး ” place-apk-here-for-modding ” ဆိုတဲ့ ဖိုဒါဆီပြန်သွားပြီး System_Setting.apk ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို System_ ဆိုတာလေးဖြုတ်ပစ်ပြီး နံမည်ကိုပြင်လိုက်ပါ။
၂၇။ ပြီးသွားရင်တော့ Setting.apk ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးရသွားပါပြီ။
၂၈။ ဖိုင်လေးကို သွင်းရလွယ်ကူအောင် CWM flashable zip လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါရစေ။ CWM နဲ့ install မလုပ်ချင်ရင်လဲ Root Explorer သုံးပြီး System>app ထဲမှာ overwrite လုပ် permission ကို rw-r–r– ပြောင်းပေးပြီး ဖုန်းကို reboot ချလိုက်လဲရပါတယ်။
၂၉။ CWM flashable zip ဒေါင်းရန်
၃၀။ 7zip software ဒေါင်းရန်
၃၁။ အဆင့် ၂၈ မှာဒေါင်းလို့ရတဲ့ software ကိုကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပါ။
၃၂။ အဆင့် ၂၇ မှာဒေါင်းလို့ရတဲ့ zip ကို Right click နှိပ်ပြီး 7zip ကိုရွေး Open Achieve ကိုဆက်ရွေးပေးပါ။
၃၃။ ပေါ်လာတဲ့ box လေးကနေ system>app ဖိုဒါဆီအဆင့်ဆင့်သွားပေးပါ။ app ဖိုဒါထဲက setting.apk လေးကို delete လုပ်ပါ။
၃၄။ ပြီးရင် ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့ setting.apk ဖိုင်လေးကို အဲဒီ app ဖိုဒါထဲကို ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။ Mouse နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
၃၅။ ပြီးရင် အဲဒီ box လေးကို ပိတ်ပြီးတော့ zip ဖိုင်ကို sd card ထဲထည့် CWM recovery နဲ့ install လုပ်လိုက်ရင် ပြီးပါပြီ။ နောက်
Samsung တချို့ဖုန်းတွေအတွက် မရဘူးလို့ Feedback တွေရပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ အဆင့် 1 ကနေ5အတိုင်း framework-res.apk အပြင် twframework-res.apk ဆိုတဲ့ file ကိုပါ တပါတည်း install လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဝှုးးးးး မောထှာ….:) ဝိုင်းဝန်းစမ်းသပ်ပေးကြတဲ့ MMUG မှာ ညီအကို member များအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဗျာ…နို့မို့…ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲရပြီး ကျန်တဲ့သူတွေမရဘဲ solution ပျောက်နေမှာဗျ……
နောက်တစ်ခုက ဒီပို့စ်မှာ comment ပေးသွားတဲ့ တစ်ယောက်ပြောသလိုပဲ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ခေါ်ဆိုမှုတွေကို မြန်မာဘာသာ စံသတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုလိုက် ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်လိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမလားလို့ပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်သင့်သလဲ ဆိုတာ အကြံဝိုင်းပေးကြပါအုံး။
Myanmar mobile application store မှကူးယူဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by နည်းပညာစုစည်းမှု at 10:19 AM
လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ပထမဆုံး ဖတ်စေချင်တယ်
Download လုပ်နည်း ပို့စ်အားလုံးဖတ်ရန်
Viber ကို Symbian OS တွေ Windows Phone 7တွေ၊ Bada OS တွေ အတွက် ထုတ်ပေးထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Voice Calling ကိုတော့ တစ်ချို့ OS တွေမှာ Support မလုပ်ပေးသေးပါဘူး။ SMS နဲ့ Photo Sharing ကတော့ OS အားလုံးမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ...
Serverx.exe ကို သတ်ပစ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခု
Serverx.exe ဟာ Web ပေါ်ကနေကူးစက်လာတဲ့ malicious အသစ်စက်စက် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီကောင် ကိုက်ရင် Taskmanager , registry editor နဲ့ folder option တွေကို Disable လုပ်ပစ်ပါတယ်.. Internet Explorer, MSN, NetMeeting, Outlook Express တွေကို သူ့ဖိုင်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်.. ဆိုလိုတာက Internet ...
17.1.2013 ရက်နေ့အတွက် Kaspersky Daily Key
17.1.2013 ရက်နေ့အတွက် Kaspersky Daily Key ဖြစ်ပါတယ်.. Depositfiles DOWNLOAD From Mediafire.com အဆင်ပြေပါစေ အောင်မျိုးဆက်
Viber ကို Symbian OS တွေ Windows Phone 7တွေ၊ Bada OS တွေ အတွက် ထုတ်ပေးထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Voice Calling ကိုတော့ တစ်ချို့ OS တွေမှာ ...
Serverx.exe ကို သတ�
Serverx.exe ဟာ Web ပေါ်ကနေကူးစက်လာတဲ့ malicious အသစ်စက်စက် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီကောင် ကိုက်ရင် Taskmanager , registry editor နဲ့ folder option တွေကို Disable လုပ်ပစ်ပါတယ်.. Internet ...
17.1.2013 ရက်နေ့အတွက် Kaspersky Daily Key ဖြစ်ပါတယ်.. Depositfiles DOWNLOAD From Mediafire.com အဆင်ပြေပါစေ အောင်မျိုးဆက်
မင်္ဂလာပါ.. ကျွန်တော့်ဆီကို လာလည်သူတွေအတွက် တစ်ခုခု အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ ယုံကြည့်တဲ့အတွက် ဒီ website ကို ရေးဖြစ်တာပါ.. ဝေဖန် အကြံပြုကြပါ..
Windows Vista, 7, 8 ကို ဆော့ဝဲမသုံးပဲ USB ကနေ တင်ရအောင်
Posted by mp On January - 18 - 20130Comment
သူငယ်ချင်းတို့ကို ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့် နည်းပညာကတော့ ဘယ်လို Windows အမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် USB ကနေ Install လုပ်နိုင်မယ့် နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီနည်းလမ်းမှာ ဘာဆော့ဝဲမှ သုံးစရာမလိုပါဘူး .. ဒါပေမယ့် cmd လို့ခေါ်တဲ့ Command Prompt ကို အသုံးပြုပြီး DOS Command တွေနဲ့ ၀င်းဒိုးကို ခိုင်းစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စနစ်တကျလုပ်နိုင်ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ် .. နောက်ပြီး ဒီနည်းလမ်းမှာ ၀င်းဒိုးခွေကို ISO ခွေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်သလို ရိုးရိုး ၀င်းဒိုးခွေကို DVD drive ထဲထည့်ပြီးတော့လည်း အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ကဲ .. ပထဆုံး ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ USB ကို စက်မှာ တပ်ထားလိုက်ပါ ..လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ပုံလေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး လုပ်နိုင်အောင် အဆင့်တိုင်းနီးပါးအတွက် ပုံလေးတွေ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. ပုံတွေ သေးနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ါးနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံပေါ်ကို မောက်စ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါ .. အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .. ၀င်းဒိုးအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ USB အရွယ်အစားကတော့ 4G နဲ့အထက် ဖြစ်ရပါမယ် .. (ကျွန်တော်ကတော့ ၀င်းဒိုးအားလုံးအတွက် 8G ပမာဏရှိတဲ့ USB တွေကိုပဲ သုံးပါတယ် ) USB ကို စက်မှာတပ်ပြီးပြီဆိုရင် Command Prompt ကို Administrator အဖြစ် ဖွင့်ရပါမယ် .. အလွယ်ဆုံးကတော့ [ Read More ]
WebCam ကို သူများမသုံးရအောင်ပိတ်ထားပေးမယ့် CamBlocker.1.0.0.9
Posted by mp On January - 17 - 20130Comment
CamBlocker.1.0.0.9 က ကွန်ပျူတာရဲ့ webcamera ကို password သုံးပြီးပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်.. ကိုယ့် webcamera ကို သုံးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို ခြေရာခံနိုင်တဲ့ Spy တွေရဲ့ ရန်က ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. Is someone spying on you through your web camera? CamBlocker enables you to block all your web cameras, when you don’t need them, and protect yourself from being spied on. You can also password protect CamBlocker and prevent your teenager, or anyone else, from usingaweb camera. The program stays out of way in system tray area, with minimal use of system resource. အဆင်ပြေပါစေ မောင်ပေါက် Download >> Ziddu >> Zippyshare >> Tusfiles
IDM ကို Browser အားလုံးမှာ ဒေါင်းလို့ရအောင်လုပ်မယ်
အောင်မျိုးဆက်ခင်ဗျာ Maxthon web browser မှာ IDM နဲ့ဒေါင်းချင်ပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် ဒေါင်းလိုက်ရင်Maxthon နဲ့ပဲဒေါင်းနေလို့ပါအကို ကူညီပါနော်.. အောင်မျိုးဆက်ဆီကို Email ကနေ ပြောလာတာပါ.. Email ကပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ပုံနဲ့တင်ရင် ပိုရှင်းမလားလို့.. ပြီးတော့ အခြားမသိသေးတဲ့လူတွေလည်း သိသွားတာပေါ့နှော်.. ၁။ IDM ကိုဖွင့်ပါ.. ပြီးရင် Option ကိုနှိပ်ပါ.. ၂။ ပွင့်လာတဲ့ Option Box ထဲက General Tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပါ.. Genenal Tab View ထဲမှာ IDM နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Browser ကို မြင်တွေရပါမယ်.. ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Browser မပါသေးဘူးဆိုရင်တော့ Add Browser ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ. ၃။ အဲဒီမှာ Please locate the browser နဲ့စတဲ့စာသားနဲ့ Dialog Boxတစ်ခုကျလာပါတယ်.. OK နှိပ်လိုက်ပါ.. ၄။ ဒါဆိုရင် Browser ကို ဖွင့်ဖို့ Locate the browser ဆိုပြီး Dialog Box တစ်ခု ထပ်ကျလာပါတယ်.. ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Browser ရဲ့ exe ဖိုင်ကို ရွေးပေးပြီး Open ကိုနှိပ်ရပါမယ်.. Maxthon မှာတော့ Maxthon ဆိုတဲ့ Folder ကို Double Click ခေါက်.. [ Read More ]
အခုပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကို သေချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်စေချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲက အရင်ဆုံး 2000 ကုန်မှာဖြစ်နေလို့ပါ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်. . .တော်ကြာ 2000 ကုန်သွားတယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကြိုပြောတာပါခင်ဗျာ… လစဉ်ကြး 1-လ 2000 သီချင်းတစ်ပုဒ်-300 Ytune ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် … မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများမှ သင့်ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုသော အခါ ပုံမှန် မြည်နေသော Ring မြည်သံ အစား တီးလုံးသံလေးများ ကြားလိုပါသလား? Ytune ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းသော သံစဉ်များဖြင့် သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ချိန်တိုင်းမှာ စိတ်ကြည်နူးမှုရယူနိုင်ပါတယ် .. Ytune အား ပုံမှန်လစဉ်ကြေး ပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့် မိမိထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသော မိတ်ဆွေများကို Ring Tune သီချင်းသံလေးများ နားဆင်စေရင်း ရသသစ်တစ်မျိုးခံစားနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်… သင့်မိတ်ဆွေများ ထံသို့ တစ်နေ့တာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ချိန်တိုင်းအတွက် “သံစဉ်များသီကျူးပေးနေမဲ့ Yatanarpon Ytune” အား အသုံးပြုကြပါစို့ … Online Register ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် – ပထမအဆင့်အနေဖြင့် Ytune Service Website (http://www.ytune.com.mm ) သို့ ဝင်ရောက်ပါ။ – Ytune Service ရယူရန် ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီအတွက် အကောင့်တခုစီ လျှောက်ရမည်။ အကောင့်လျှောက်ရန် အတွက် Ytune Service Website ပထမဆုံးစာမျက်နှာ ဝဲဘက်အထက်နားရှိ Register ဟူသော Link [ Read More ]
Viber ကို Symbian OS တွေ Windows Phone 7တွေ၊ Bada OS တွေ အတွက် ထုတ်ပေးထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Voice Calling ကိုတော့ တစ်ချို့ OS တွေမှာ Support မလုပ်ပေးသေးပါဘူး။ SMS နဲ့ Photo Sharing ကတော့ OS အားလုံးမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်မယ့် Viber ကိုဒေါင်းသွားလိုက်ပါ NOKIA အတွက်လဲပါတယ်နော် For S460 For Symbian For Windows7Phone Bada – Wave M Wave3ref to techspace journal ကိုလတ်(ကျွဲဆင်း)
17.1.2013 အတွက် ESET Username and Password
ESET Username and Password ကို တင်တာ နောက်ကျနေဘီ….. ဒီည တော့ ရသေးတယ်.. SEE Here !
17.1.2013 အတွက် Daily Premium Account
17.1.2013 အတွက် Daily Premium Account ပါ. ဒီညထိတော့ မီပါသေးတယ်.. NOVAFILE Premium Accounts & Cookies User : rocky14 Pass : rocky14 UPLOADED Premium Accounts & Cookies Cookie : id=7788263&pw=037ed8d14c889af02949b0f695788460e6307445&cks=9c66616d4506 SAARIE Premium Accounts & Cookies User : banjo Pass : banjo User : superlogin Pass : premium-login.com EXTABIT Premium Accounts & Cookies Cookie : 7cbc479893e93b31cca9b8835da3fcb0 NETFLIX Premium Accounts & Cookies User : aceman Pass : aceman User : sparty Pass : sparty RAPIDSHARE Premium Accounts & Cookies Cookie : 9A5A616199C073E4F3B41EB9C365E76FC7997D695D53E9EA36EA4D8836CAE3CA345E8D202E2F7777793CD3A9CF0C4EB5 VIDEOBB Premium Accounts & Cookies User : rufusexc Pass : grendizer HULU Premium Accounts & Cookies User : savioroftruth2 Pass : 2alone [ Read More ]
Learnin Linux ( Linux အသုံးပြုနည်းစာအုပ်)
ဒီစာအုပ်ကို ဆရာ ဦးဇော်လင်းရေးထားပြီး.. Linux အုပ်စုဖြစ်တဲ့ Fedora , Ubuntu, Red Hat Enterprise စနစ်တွေအကြောင်း အခြေခံကျကျရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်လုံး Windows ကိုသာသုံးလာနေခဲ့ကြတာပါ.. Mac ဆိုတာ လူကုံထံ အသိုင်းအ၀ိုင်းလောက်ကပဲ သုံးဖြစ်တယ်လေ.. ဒီ Linux ဟာ Open Source တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုတတ်ရင် လုံခြုံရေးစနစ်ကော၊ Performance ရော အခြား OS တွေထက် အများကြီး သာတယ်လို့ ပြောပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ မောင်ပေါက် Download >>> Mediafire >> Tusfiles >> Zippyshare
Disk Defragmenter for Android v1.0.apk
ကျွန်တော်တို့ PC မှာသုံးတဲ့ Disk Defragmenter လိုပဲ Android မှာသုံးတဲ့ Disk Defragmenter ဖြစ်ပါတယ်.. ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဖိုင်တွေကို သူ့နေရာနှင့်သူ ပြန်စီပေးတဲ့ကောင်ပါ.. Version Need: Android: 2.1 and up Overview: Disk Defragmenter for Android. Increase your phone performance by defragmenting your SD card. A must have app now available for phones and tablets. Our defragger perfectly works with multiple filesystems such as fat32 and ntfs. Defragmentation isaprocess designed to increase access speed by rearranging files stored onadisk to occupy contiguous storage locations. It also boosts the allocation speed for new files, as allocating contiguous disk sectors requires less operations. What can Disk Defragmenter really do? [ Read More ]
Android သုံး English Grammar – Phrasal Verb.apk
Android သုံး English Grammar – Phrasal Verb.apk ဖြစ်ပါတယ်.. Phrasal Verb အကြောင်း ပြည့်စုံစွာ ဖေါ်ပြထားတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် မိမိဖုန်းထဲမှာ ထည့်ပြီး သွားလေရာ သယ်ဆောင်လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ မောင်ပေါက် Download English Grammar – Phrasal Verb
ကျွန်တော့်ရဲ့ Mediafire အကောင့်တစ်ခုလုံး Block လုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် Mediafire က ဖိုင်တွေကို Download လုပ်လို့ မရခဲ့ရင် Comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Cbox မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးပေးခဲ့ကြပါ.. Comment မှာရေးရင်တော့ လင့်နဲ့တကွ ကျွန်တော့် Email ကို ရောက်ပါတယ်.. Cbox မှာဆိုရင်တော့ Link လေးပါ ရေးပေးခဲ့ကြပါလို့.. Mediafire အကောင့် အသစ်လုပ်ထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် စိတ်နာတယ်.. အဲဒီမှာ သိပ်တင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး..
Thet Paing on Huawei T-8828 Root လုပ်ဖို့ ….
Xara 3D Maker [Download] | software solutions and applications on Xara 3D Maker7Full ( 45.1 MB )
Gipsy Moe Tain on Android OS ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးကြရအောင် (how to install Android OS on PC/Laptop)
This BLOG ... on အခပေး Android Apps တွေနဲ့ Games တွေ စုစည်းမှု (1.6GB)
This BLOG ... on Reset Windows Password v1.90 (29.7MB)
email လိပ်စာထည့်ပြီး Subscribe ကို နှိပ်ပါ ပေါ်လာတဲ့ဘောက်ထဲကcode နံပါတ်ကို မှန်အောင် ရိုက်ထည့်ပြီး Complete subscription Request ကို နှိပ်ပါ Feedburner မှ ယခုရိုက်ထည့်လိုက်သော email သို့ မေးလ်တစ်စောင် ပို့ပေးပါမယ် အဲဒီမေးလ်ထဲက To activate ဆိုတဲ့စာသားရဲ့အောက်ကအပြာရောင် Activate Link ကို နှိပ်ပါ Email Subscription Confirmed! လို့ အတည်ပြုပြီးကြောင်း ပေါ်လာပါမယ်။ အခုဆိုရင် ဒီဆိုဒ်အတွက် ပို့စ်အသစ်တွေကို ကိုယ့်အီးမေးလ်ကနေထိုင်ဖတ်နေရုံပါပဲ။ ပို့စ် တင်တာနဲ့ ချက်ချင်းရောက်မှဖြစ်ပါတယ်.....
Email လိပ်စာထားခဲ့ပါ.. အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါမည်
အခု ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ Website Domain Name ကို ထိုင်းမှာနေတဲ့ ကိုရဲဝင်းထွန်းက ၀ယ်ပေးခဲ့တာပါ.. ကိုရဲဝင်းထွန်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒိုမိန်းကို ၀ယ်ပေးစဉ်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်လက်ရှိရေးနေတဲ့ http://komaungpauk.blogspot.com နဲ့ ချိတ်ပြီးတင်မလို့ပါပဲ
ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့လို့ တစ်နှစ်စာ Free Host မှာ တင်ရေးထားရတာပါ.. 21.9.2013 မှာ Host က ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်.. ကုန်လည်း Host မ၀ယ်နိုင်ရင် နောက်ထပ် Free host မှာ ထပ်ရေးအုံးမှာပါ.. ဒိုမိန်းက2နှစ်စာလေ.. ဒီ website မှာ ရေးသမျတွေကို http://komaungpauk.blogspot.com မှာလည်း လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Select Month January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 May 2012 April 2012 January 2012
Copyright © 2013 မောင်ပေါက် - .
Samsung Galaxy Tab2-7.0 GT-P3100 ကို Official Jellybean (V4.1.2) တင်ပြီး Root ရအောင် – Myanmar Mobile App Store
Edition: Myanmar Language |
ဖုန်း Ringtones များ
Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 ကို Official ICS (V4.0.4) တင်ပြီး Root ရအောင်
Android ROM / Android Tutorials / Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By naung2soe4750
Samsung Galaxy Tab2-7.0 GT-P3100 ကို Official Jellybean (V4.1.2) တင်ပြီး Root ရအောင်
Samsung Galaxy Tab2-7.0 GT-P3100 ကို Official Jellybean (V4.1.2) တင်ပြီး Root မယ်
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ လိုအပ်တာလေးတွေဒေါင်းရအောင်ဗျာ နော့
ှSamsung Driver(Kies) မရှိသေးဘူးဆိုရင် ဒီမှာဒေါင်းပါ — > Kies
Odin မရှိသေးဘူးဆိုရင် ဒီမှာဒေါင်းပါ — > Odin v3.04
– >Odin v1.85
Firmware ဒီမှာဒေါင်းပါ –> P3100 4.1.2 XXCLJ3 Jelly Bean
အဆင့်(1) Driver မရှိသေးပါက Kies ကို Install ထားလိုက်ပါ
အဆင့်(2) Odin ကို Run လိုက်ပါ…Odin ရဲ့ PDA လေးမှာ ဒေါင်းယူပြီး ဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ Folder ထဲက ဒီကောင်လေးကို
– > P3100XXCLL3_P3100RXECLL1_P3100XXCLJ3_HOME.tar.md5 < — သွင်းထည့်လိုက်ပါ
အဆင့်(3) မိမိရဲ့ Tab မှာ Unknown sources and USB Debugging Mode ၂ခုစလုံး ON ထားပေးပါ ..ထို့နောက် Power ပိတ်လိုက်ပါ
မိမိရဲ့ Tab ကို Download Mode ၀င်ပါမယ် == (Power+ Volume Down) key ၂ခုကို တွဲနှိပ်ထားလိုက်ပါ ပြီးရင် Volume Up တချက်နှိပ်လိုက်ပါ Downloading ပေါ်နေရင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ..USB ကြိုးထိုးလိုက်ပါ
အဆင့်(4) Odin ရဲ့ဘယ်ဘက်အခြမ်းလေးမှာ ခရမ်းနုရောင်လေး(Odin v3.04) / အ၀ါရောင် (Odin v1.85) ပေါ်နေပြီဆိုရင်မိမိရဲ့Tab ကို PC/Laptop ကသိနေပါပြီ။။ မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ Driver ကိုပြန် Check ကြည့်ပါ..
မိမိရဲ့ Tab ကို Odin ကသိပြီဆိုရင်တော့ Start လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ..Firmware Install နေပါလိမ့်မယ် Odin မှာ PASS ပြပြီဆိုရင်တော့ Firmware တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးပါပြီ
မိမိရဲ့ Tab လေးကိုဖွင့်ပြီး About Device ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါ Android Version * 4.1.2 * လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ဟိဟိ
*** Root ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင့်(5) ကို ဆက် Go မယ် ခိစ်ခိစ် ***
အဆင့်(5) Firmware တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Root လုပ်ကြရအောင်
လိုအပ်တဲ့ Root file လေးကိုဒေါင်းရအောင် — > ဒီမှာယူပါ
ဒေါင်းယူပြီးသွားရင်တော့ အဲဒီကောင်လေးကို Odin ရဲ့ PDA မှာသွင်းထည့်ထားလိုက်ပါ
မိမိရဲ့ Tab ကို Download Mode ၀င်ပြီး PC/Laptop နဲ့ချိတ်ပါမယ်..Odin က မိမိTab ကိုသိပြီဆိုရင်တော့ Start ပေ့ါဗျာနော့
Odin မှာ PASS ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ Tab လေးဟာ restart ကျသွားပြီးပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်
ရှာကြည့်လိုက်နော် SuperMan ပုံလေးကို ဟိဟိ….. ဟော ဟော တွေ့ပါပြီဗျာ Super SU လေးကို
Tab2-7.0 P3100 ကို Jellybean V 4.1.2 တင်ခြင်းနှင့် Root လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပေသည်
naung2soe4750 - ဘာကိုမှမမျှော်လင့်ထားပါဘူး..အခြားသူတပါး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖို့သာ မျှော်လင့်ပါတယ်...။
GALAXY NOTE N7000 FOR XPERIA ROM ANDROID VER (4.2.1)
Sony Xperia J ကို Root ပြုလုပ်ချင်သူတွေ အတွက် Root ပြုလုပ်ပုံ
OS X ကနေ တချို့သော memory stick, hardisk , SD card များကို file များကူးထည့်လို့မရခြင်းကို ဖြေရှင်းနည်း
kyaw thi ha says:
not 4.1.1 after upgrade base version is p3100xxclj3 4.1.2
အောက်ပါမေးခွန်းကုိုဖြေပြီးမှ Comment ပေးပါ
thetmg on iOS 6.0.1 ကို “Missing keys .plist data for this build” ဆိုတဲ့Error မပါအောင် Jailbreak လုပ်မယ်…
U Ku Tha La(ဦး ကုသလ) on Huawei U8661 Root & Install Myanmar font
phownkyee on Google Play ကို မြန်မာနိုင်ငံမှဝင်နည်း (၃) (Last Update)
Lin on iOS 6.0.1 ကို “Missing keys .plist data for this build” ဆိုတဲ့Error မပါအောင် Jailbreak လုပ်မယ်…
4.0.3 adroiad os Air air control Android Android App Android Appication Android application Android Game android os Android OS application များ Android phone Android Photo Effect Android Theme Android Themes Android ဖုန်း theme များ APK apps audio manager Bagan Innovation Technology Bank BIT C8500 Construction Contact Backup Control Cool Cydia E-Book emergency Galaxy Nexus Game Hot News iOS application များ ios learning Application iPad iPhone Journal Mingalar Cinemas mizzima mizzima english mizzima ios mizzima mobile application the voice the voice weekly
2011-2013 Myanmar Mobile App Store . All Rights Reserved
APK များကို PC တွင် phone မှာမြင်ရသလိုမြင်အောင်ကြည့်ချင်သူများအတွက်
ကိုယ့်ရဲကွန်ပျူတာလေးမှာ Pc suit တွေဘယ်လောက်တင်ထားတင်ထား APK ဖိုင်တွေရဲ့ icon လေးတွေမြင်ရအောင် အောက်က software လေးကိုဒေါင်းပြီး Install လိုက...
Huawei U8818 ICS 4.0.3 အလွယ်ဆုံးတင်နည်း
အရင်ဆုံးလိုအပ်တာလေးတွေနဲနဲပြောပြမယ်နော်။ ၁။ သင် u8818 ရဲ့ ICS firmware ဖိုင်ကိုအရင်ဒေါင်းရပါမယ်။ Firmware Download ပြီးရင် သင် ဒေါင်း...
S2 i9100 ကို 4.1.2 နဲ့ လန်းအောင်ပြုပြင်ချင်သူများအတွက်
ပထမဆုံး Firmware ကိုအရင် Download လုပ်ပါ။ Android 4.1.2 Jelly Bean [XXLSJ].rar Odin ကိုဒီမှာဒေါင်းမှာ Odin3_v3.04@www.myanmarmobileso...
Huawei U8818 ကို 4.1.2 နဲ့ လန်းချင်သူများအတက်
U8818 ကို Custom Firmware 4.1.2 တင်လို့ရပါပြီ။ အရင်ဆုံး U8818 က 4.၀ အနေအထားမှာဆိုရင် CWM အရင် သွင်းရပါမယ်…. CWM Installer (Mediafire)...
Clockworkmod Recovery သွင်းနည်းများ ------------------------------Install CWM on C8500------------------------------ C8500 ကို cwm သ...
ဒီပိုစ့်လေးမှာတော့ Setting ကိုမြန်မာလိုပြင်နည်းလေးပဲရေးလိုက်ပေမဲ့ သုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလို ကျန်တာတွေပါပြင်လို့ ကလိလို့ရပါတယ်။ အရင်ဆုံး ...
Samsung Galaxy Ace S5830 အား Android 4.1.1 JellyBean (CynogenMod 10) သို့ Upgrade လုပ်နည်း
Myanmar Moblie App ကနေ ကူးယူတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Galaxy Ace S5830 ကို Android 4.1.1 JellyBean သို့ version မြှင့်...
APP ဒေါင်းရန် ဒေါင်းရန်
ဘလောက်ကို 28-11-2012 မှာစရေးပါတယ်။မှော်ဘီကိုရောက်နေတုန်းပေါ့။ ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာရင်း ကျွန်တော့်လိုလေ့လာနေသူများအတွက် လေ့လာမိသမျှကိုပြန်တင်...
Huawei T8620 ကို Root မယ်
အကိုရေ အကိုပြောတဲ့ Huawei T8620 Root ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဆင်ပြေပါတယ် အာမခံတယ် ပထဆုံး root လုပ်ရန် root tool ဒေါင်...
Samsung Galaxy Ace S5830 အား Android 4.1.1 JellyBe...
Andirod Application (1)